कोरियामा गुडिरहेको कार हिँउमा चिप्लिएर बाटोमा रहेका ३ विदेशी श्रमिकलाई किच्यो, गयो सबैको ज्यान – Eps Sathi
December 29, 2021 1452
दक्षिण कोरियामा केहि समयदेखि हिउँ परिरहेको छ। जाडो मौषम सुरु भएसँगै तापक्रम पनि निकै तल माइनसमा झरिसकेको छ। अत्याधिक जाडो तथा माइनस तापक्रम तथा लगातारको हिँउका कारण यहाँको जनजिवन पनि कष्टकर बनेको छ। हिउँ र चिसोका कारण जनजिवन क’ष्टकर मात्र नभएर यसकै कारण दु’र्घटना पनि बढेको छ।
कोरियामा चिसो र हिउँका कारण बाटो चिप्लो भएपछि मंगलबार आसान शहरमा एक कार चिप्लिएपछि दु’र्घटनामा परेको छ। गुडिरहेको कार हिउँका कारण चिप्लिएपछि ३ जना विदेशी कामदारलाई किचे’को थियो। ति ३ जना विदेशी कामदारहरु पनि हिउँकै कारण बाटो चिप्लो भएर दु’र्घटनामा परेको अर्को गाडीलाई सहयोग गरिरहेका थिए।
अरुलाई सहयोग गरिरहेका उनिहरुलाई फेरि अर्को कार चिप्लिएर आएर कि’चेको हो। यो घ’टना दक्षिण कोरियाको राजधानी सउलबाट ८५ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको आसान सहरमा घ’टेको हो। सोमबार साँझ घटेको यो घटनामा दुई जना रसियन नागरिक तथा एक उज्वेकिस्तान र एक काजकिस्तानका नागरिक परेका थिए।
दु’र्घटनामा परेका ४ जनामध्ये ३ जनाको ज्या’न गए’को आसान प्र’हरीले जानकारी दिएको कोरियाली सन्चार माध्यमहरुले जानकारी दिएका छन। उनिहरु चारै जना हिउँका कारण चिप्लो भएको बाटोमा फँसेको १ टन क्षमताको सामान ओसार्ने गाडीका फिलीपिनी ड्राइभरलाई सहयोग गरिरहेका थिए। यसै क्रममा अर्को एक कार चिप्लिएर उनिहरुभए तिरै आएपछि यो घ’टना घ’टेको थियो।
यि चार जना विदेशी कामदार आफ्नो गन्तब्यमा गइरहेका बखत बाटोमा उनिहरुले नचिनेको फिलीपिनी ड्राइभरको उक्त सामान बोक्ने गाडीलाई सहयोग गर्न आफ्नो कारबाट तल ओर्लेका थिए। फिलिपिनी ड्राइभर र ४ जना विदेशी सहित ५ नै जनालाई चिप्लिएर आएको कारले ठ’क्कर दिएको थियो। फिलिपिनी ड्राइभर घ’टनास्थलमै र बाँकी चार जना विदेशी श्रमिकलाई अस्प’ताल लगिएको थियो। उप’चारका क्रममा अरु २ जनाको ज्या’न गएको प्र’हरीले जानकारी दिएको छ।
Prevलामो समय कोरियामा रोजगारी गरेर फर्केका युवकको सडक दृ’घटनामा गयो ज्यान
Nextकन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालीकाले मौषमी कामदार कोरिया पठाउँदै? कस्तो भिजा हो यो? जानौं